स्कटल्याण्डमा नेपाल अध्ययन दिवस | We Nepali
स्कटल्याण्डमा नेपाल अध्ययन दिवस
२०७६ वैशाख ९ गते १९:१५
तस्वीर- कृष्ण अधिकारी
लण्डन । ब्रिटेन नेपाल प्रज्ञा परिषद्को आयोजनामा स्कटल्याण्डको एडिनवरामा १७ औँ नेपाल अध्ययन दिवस सम्पन्न भएको छ ।
अप्रिल १५ र १६ गरि दुईदिन चलेको अध्ययन दिवसको स्थानीय संयोजन रोयल बोटानिकल गार्डेन र एडिनवरा विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । पहिलो दिन रोयल बोटानिकल गार्डेनमा कार्यक्रम भएको थियो भने दोस्रो दिन विश्वविद्यालयमा । सहभागीहरुलाई रोयल बोटानिकल गार्डेनको नेपाल खण्डको भ्रमण पनि गराइएको थियो ।
परिषद्का अध्यक्ष डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार सो अवसरमा विभिन्न ८ विधामा ३२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्रहरुलाई कला र सँस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, राजनीति, विकास, लिंग र सामाजिक परिवर्तन शीर्षकमा विभाजन गरी छलफल चलाइएको थियो ।
अध्ययन दिवसमा नेपाल, स्पेन, नर्वे र डेनमार्कबाट समेत गरी ६५ जना अध्येताहरु सहभागी थिए ।
सो अवसरमा साइमलन फ्रेजर विश्वविद्यालयकी प्रख्यात मानवशास्त्री प्रोफेसर स्टेसी लि पिगले ‘न्यारेटिङ डेभलपमेण्ट’ शीर्षकमा प्रवचन दिएकी थिइन् ।
अध्ययन दिवसकै सन्दर्भ पारेर परिषद्ले बीएनएसी डिजटेसन प्राइज डा. सामुयल पोलेटीलाई प्रदान गरेको छ । सो पुरस्कारको राशी २५० पाउण्ड छ । यस्तै परिषद्ले आगामी चार वर्षका लागि प्राध्यापक पदम सिंखडा, सारा पार्कर, सपना विष्ट, डा. स्टेफेनी लोटरलाई परिषद्को कार्यसमितिमा चयन गरेको छ भने फेइजी स्मेली, जीवनराज शर्मा र कुमुद रानालाई कार्यसमितिमा मनोनित गरिएको छ ।
यस्तै, सोही अवसरमा बेलायती सरकारी एजेन्सी डिपार्टमेण्ट फर इन्टरन्याश्नल डेभलपभेण्ड (डिफिड) का अधिकारीहरुसित परिषद्का पदाधिकारीहरुको ‘कन्फ्रेन्स कल’ मार्फत छलफल समेत गरिएको थियो ।